Day: Mee 11, 2020
Akpọsa ọkwa ịzụta afọ 2020
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwupụtara mkpebi ọhụrụ e mere na ọgụ megide coronavirus mgbe Nzukọ Ndị Isi Mgbe Onye isi ala Erdoğan kwukwara maka ịzụta tii wee kwuo nkwupụta a: Erdogan kwuru, “Maka afọ 2020 [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta mgbe ọgbakọ ndị isi ahụ gasịrị. Site na nkwupụta ahụ, ndị gafere afọ 65 ga-enwe ike ịpụ n'okporo ụzọ na Sọnde, Mee 17, 2020 n'agbata 11.00-17.00. N’okpuru afọ 20 [More ...]
A napụrụ Wepụ njem na Obodo 9
Wepụrụ Ochichi Njem Gaa n’obodo 9: Onye isi ala Erdogan, onye kwuru okwu banyere isi okwu a bịarutere n’ọgbakọ ahụ na Nzukọ Ndị Isi, kwupụtara na ebuliri mmachibido njem maka obodo ahụ. Ndị a bụ mpaghara ebe ebuli mmachibido njem njem. [More ...]
Nkeji Ikpeazu: Mmachibido iwu eji abanyela Daysbọchị 4 na Nlele Ọhụụ abịa
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta dị mkpa mgbe ndị isi ala ahụ gasịrị. "A ga-etinyere oge ịghachị na Mee 16-17-18-19," ka Erdogan kwuru na nkwupụta. Na nzukọ ebe Erdogan kwupụtara mkpebi izu ya na adreesị mba ahụ, [More ...]
Mgbado COVID-2020 maka oge ezumike 19
Na nke na-abịa nke okpomọkụ oge mgbe ihe ntiwapụ nke Turkey Covidien-19 ya e mere ka ọ dị mkpa na-arụ ọrụ na mgbake nke njem oru. N'ime ogo nke ihe omumu a, ike nke otutu ulo ebe ndi gara ileta ka O ga-eji nkecha belata. Anyanwụ ụlọ dị n'ụsọ osimiri [More ...]
Post Coronavirus ntutu na ntutu isi
N'ime oke nke usoro coronavirus, ndị na-akpụ isi na ndị na-edozi isi, bụ ndị kwụsịtụrụ ọrụ ha na March 21, malitere ọrụ dị ka ụtụtụ taa. Ndị ahịa ndị bịara na mmeghe nke ndị na-akpụ isi nwere aka ha n'okpuru iwu ọcha. OZI 40 NA OJIJI [More ...]
Razọ ilgbọ okporo ígwè na Sistemụ Njikwa Ogo
Ọ bụrụ na a na-atụle ụlọ ọrụ ụgbọ oloko n'ihe banyere usoro ịdị mma, ọ nwere ike ịnabata ọtụtụ ụkpụrụ na sistemụ nchịkwa. Oghere ntinye ahụ nwere ọtụtụ ngwa n'ime ụlọ ọrụ a zuru oke. ISO 9001: 2015 njikwa mma na okporo ụzọ [More ...]
Kedu otu Coronavirus si emetụta ụmụ nwanyị dị ime
Ndị ọkachamara na-ekwupụta na nchegbu ha nwere ike ịba ụba na mgbanwe nke homonụ nke ụmụ nwanyị dị ime na-arịa ọrịa ọrịa na-egosi na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ kwesịrị ịbụ ihe siri ike n'oge usoro a. Ndi okacha mara nyere ndi nne aka jiri nlezianya na aru oru [More ...]
Ọnye na-bụ Şakir Zümre?
Şakir Zümre, otu n'ime ezigbo ndị enyi Marshal Fevzi Çakmak, amụrụ na Varna na 1885. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ praịmarị ya ebe a, ọ gara Geneva. Ọ mụrụ iwu ebe a. Ọzọkwa n'oge Agha Worldwa Mbụ [More ...]
Onye Minista Karaismailoğlu nyochara okporo ụzọ Hospitallọ Ọgwụ City City Başakşehir
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu mere nyocha na Başakşehir İkitelli City Hospital njikọ okporo ụzọ okporo ụzọ. Karaismailoğlu, a ga-eme ambulanị n'ọnụ ụzọ nke ngalaba mberede ụlọ ọgwụ yana ị na-ewu okporo ụzọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ. [More ...]
Ọjụjụ nke otu onye ejidere na mkpesa maka mkpopụ nke onye ejidere na Ankara YHT
Ingbọ oloko dị elu, nke mere njem Ankara-Konya na 13 Disemba 2018 na Ankara, gbara ụgbọ oloko ndụmọdụ mgbe ọ na-abanye na ọdụ Marşandiz. N'ime ihe mberede ahụ mere, mmadụ 9 nwụrụ na otu onye ejidere n'ime ha. [More ...]
Ozi Mkpọtụrụ Adana Train Station
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Adana ma ọ bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè Adana bụ ọdụ ụgbọ oloko TCDD nke dị na mpaghara Seyhan nke Adana. E tinyere ụlọ ọrụ ahụ na 1912. Taa, ọ bụ ebe obibi na 6th Mpaghara Directorate nke TCDD [More ...]
Mmetụta nke ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, nke bụ otu ọrụ nke Trabzon Metropolitan Mayor Murat Zorluoğlu na-akwado mkpa, ezubere ịmalite mgbe ọ bụla na njedebe nke May. Ihe ohuru nke g’emeju ihe ojoo n’obodo a [More ...]
N’ịga n’ihu na mbọ ọ na-enye ndị bi na Eskişehir njem, nchekwa na ịdị ọcha, Eskişehir Metropolitan Obodo emeela ọrụ nhicha ọ na-arụ n’oge niile n’oge ngwụcha izu a. Ọpụpụ Corona [More ...]
Ankara Obodo ukwu Ankara na-acha uhie uhie ndị ji ukwu aga njem ha, àkwà mmiri na mgbidi tọgbọrọ chakoo na isi obodo nke ndị na-ese ihe. Site na oru nke Onye Isi Obodo Mọndị Mansur Yavaş, ndị eserese nke isi obodo ahụ hiwere, [More ...]
Obodo Konya na-agbanye na usoro ọgbọ ọhụrụ na usoro nchekwa n'ime oke nke ịlụ ọgụ ụdị coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) na mmekorita ya na Mahadum KTO Karatay. atụ nke Turkey, nke bụ iji chebe ọha na eze ahụ ike na-alụso Koronavirüsl [More ...]
Bursa Okporo Returnzọ Weghachiri n'Sitentanet
N'ime usoro iwu mgbochi na etinyere na ngwụsị izu n'ime oke nke ịlụ ọgụ nje corona, obodo ukwu nke Metropolitan, bụ nke na-aga n'ihu na mmegharị mmezi na-arụ ọrụ na akwara isi nke Bursa, n'aka nke ọzọ, na-edochikwa ọrụ ndị a tụrụ anya na ndị agbata obi ruo ọtụtụ afọ. [More ...]
An agbatịla oge ụgbọ elu ụgbọ elu na Istanbul!
Obodo isi obodo Istanbul (IMM) kwupụtara na Mọnde na a ga-emejupụta ego maka ego ọhụụ n'okporo ụzọ ụgbọ oloko mgbe usoro mbubata. Usoro ga-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè ga - arụ ọrụ n'etiti 06: 00 - 23:00. Ahụmahụ na ọnụọgụ ndị njem [More ...]
Ọgbọ Akçaray agbagoro n'oge Normalization
TransportationPark, otu n'ime ndị otu Kocaeli Metropolitan Municipality kwuputara na Akçaray ga-ahazi ụgbọ elu nkeji isii na oge kachasị elu na Mọnde, Mee 11. Akçaray ga-eme njem na oge asaa dị iche iche, ụbọchị [More ...]
Amachibidoro ime njem njem n'ụwa niile n'ihi ntiwapụ nke nje corona. Maka nke a, ọnụ ọgụgụ ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Istanbul ji pasent 99,3 belata. Ndị isi ọdụ ụgbọ elu steeti (DHMI) wepụtara ndekọ ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ya maka Eprel. [More ...]
Sakarya Nostalgic Tram bụ Bid Ọzọ
N'ikwu okwu na 'Head to Head with the President' programmụ nke Mahadum Sakarya haziri, onye isi obodo Metropolitan Ekrem Yüce kwuru maka oru Nostalgic Tram, onye edobere obi ọmịiko ya n'ihi coronavirus. [More ...]
Ọnye na-bụ Tomris Uyar?
A na-echeta Tomris Uyar, onye nwụrụ mgbe ọ dị afọ 17 nanị afọ 62 gara aga ma hapụ anyị, ka ya na akụkọ ya. Lee ndu Tomris Uyar ma rụọ ọrụ Tomris Uyar (Machị 15 [More ...]
Nhọrọ kacha Ego na Greenest na Cars LPG
Mgbe ọrịa coronavirus ahụ gasịrị, usoro iwu akwadoro ịmalite na ụwa na mba anyị na-ewetara ọha mmadụ omume ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ọpụpụ mmekọrịta ọha na eze na iwu ịdị ọcha ka dị mkpa na nhazi usoro iwu, ụgbọ njem ọha na-ejedebe na kwarantaini [More ...]
Etinye ego etinyeghi aka na ngalaba amamịghe
Site na nkọwapụta nke ụkpụrụ maka imepe etiti nyocha na nhazi ndị a na-eme na mpaghara ụgbọ ala ahụ, ụlọ ọrụ nyocha, nke mere ka itinye ego ha n'ọrụ ike, amalitela ịmalite nzọụkwụ dị ukwuu iji guzobe ụlọ na ịka. Azụmaahịa ụgbọala [More ...]
Nkwado ohuru maka oru ugbo maka mmepe ime obodo nke 1,2 ijeri Liras!
Onye Minista oru ugbo na oke ohia Bekir Pakdemirli; “Anyi na n’iru iweta ndi n’etinye ihe ime obodo na-akwado IPARD na ebumnuche nke itinyekwu ego n’ime ime obodo, inwetakwu ego maka ndị na-emepụta ihe na itinyekwu onyinye n’ọrụ. Oge a [More ...]